အမ်စတာဒမ်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
အမ်စတာဒမ်မြို့သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ အမ်စတာဒမ်သည် မြောက်ဟော်လန်ခရိုင် တွင် ပါဝင်ပြီး နိုင်ငံ၏ အနောက်ဖက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် စာရင်းဇယားအရ လူဦးရေစုစုပေါင်း ၇၄၇,၂၉၀ ရှိသည်။ အမ်စတာဒမ်ဆိုသည့် အမည်မှာ အမ်စတယ် မြစ်ပေါ်တွင်ရှိသောဆည် ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ အမ်စတာဒမ်မြို့ တည်စကာလ ၁၂ရာစု နှောင်းပိုင်းတွင် တံငါရွာကလေး တစ်ရွာမျှသာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒတ်ခ်ျလူမျိုးတို့၏ ရွှေရောင်လွှမ်းသော ကာလများတွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရေးပါသော ဆိပ်ကမ်းမြို့တစ်မြို့ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သော တီထွင်တိုးတက်မှုများ၏ အကျိုးဆက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် အမ်စတာဒမ်မှာ ငွေကြေးနှင့် စိန်လုပ်ငန်းများ၏ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုရာ နေရာတစ်နေရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉ ရာစုနှင့် ၂၀ရာစု တို့တွင် မြို့တော်မှာ တို့းချဲ့ခဲ့ပြီး ဆင်ခြေဖုံးဒေသ နှင့် ရပ်ကွက် အမြောက်အများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မြို့တော် နှင့် စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်
ဆောင်ပုဒ်: ရဲရင့်ခြင်း၊ ပြတ်သားခြင်း၊ စာနာသနားခြင်း
အမ်စတာဒမ်ကို မြောက်ဟော်လန်ဒေသအတွင်း ပြပုံ
အမ်စတာဒမ်သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ငွေကြေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အချက်အခြာနေရာဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော ဒတ်ခ်ျကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့် ဘဏ်များ ၏ ရုံးချုပ်များသည် အမ်စတာဒမ်တွင် တည်ရှိသည်။ Euronext ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော အမ်စတာဒမ် စတော့ဈေးကွက်သည် မြို့လယ်တွင် တည်ရှိသည်။ အမ်စတာဒမ်၏ အထင်ကရ နေရာများဖြစ်သော သမိုင်းဝင်ရေနုတ်မြောင်းများ ၊ မီးနီရပ်ကွက် ၊ ရစ်ဂျ်ပြတိုက် ၊ ဗန်ဂိုးပြတိုက် နှင့် အန်နာဖရန့် ပုန်းအောင်းခဲ့သောအိမ် အစရှိသည်တို့နှင့် ဘင်းဂန်ဂျာ (Cannabis) ရနိုင်သော ကော်ဖီဆိုင်များကြောင့် တစ်နှင့်လျှင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် ၄.၂ သန်းမျှ လာရောက်လည်ပတ်ကြသည်။
၂ ပထဝီဝင်နှင့် ရာသီဥတု
၃ မြို့တည်နေပုံ နှင့် ဗိသုကာပညာ
၃.၂ အမ်စတာဒမ်ကို တိုးချဲ့ခြင်း
၁၀.၂ သရုပ်ဆောင် အနုပညာ
၁၀.၃ ညဖက်ပျော်စရာများ နှင့် ပွဲတော်များ
အမ်စတာဒမ် ဆိုသည့်အမည်ကို ပထမဆုံးအသုံးပြုခြင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်မှာ အောက်တိုဘာလ ၂ရ ရက် ၁၂၇၅ ခုနှစ် ရက်စွဲဖြင့် စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။ မြို့စား ဖလောရစ် ၅ (Count Floris V) မှ ထိုဒေသအတွင်း နေထိုင်သူတို့ အမ်စတယ်မြစ်ပေါ်တွင် တံတား နှင့် ဆည်ကို တည်ဆောက်သည့် အတွက် တံတားဖြတ်ခ မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုကြောင်း လက်မှတ်ဖြစ်သည်။ ထိုလက်မှတ်မှ ထိုဒေသတွင်နေထိုင်သူတို့အား homines manentes apud Amestelledamme (Amestelledamme အနီးတွင် နေထိုင်သူ ပြည်သူများ) ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ၁၃၂ရ ခုနှစ်သို့ရောက်သော အခါ ထိုအမည်မှာ Aemsterdam ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒေသခံ ပါးစပ်ရာဇဝင်အရ အမ်စတာဒမ်ကို ငါးဖမ်းသမား ၂ ယောက်မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ထိုသူတို့မှာ အမ်စတယ် မြစ်ကမ်းပါးသို့ သူတို့၏ လှေငယ်လေးဖြင့် ခွေးတစ်ကောင်နှင့် အတူ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အမ်စတာဒမ်မြို့ ကို တည်ထောင်ခြင်းသည် အခြား ဒတ်ခ်ျမြို့တော်များဖြစ်သော နစ်မီဂျန်(Nijmegen) ၊ ရော့တာဒမ်(Rotterdam) နှင့် အုထ်ရာချ် (Utrecht) တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပို၍ နောက်ကျသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ လတ်တလော သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် သုတေသနပညာရှင် တစ်ယောက်၏ အစီရင်ခံချက်အရ အမ်စတယ်မြစ်၏ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် ခုနှစ်သက္ကရာဇ် ၁၀၀၀ ခန့်မှ စ၍ နေထိုင်သူတို့ရှိရမည်ဟု ကောက်ချက်ချထားသည်။ ထို အစီရင်ခံစာတွင် ထိုသို့ အခြေချနေထိုင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ပြဆိုထားခြင်းမရှိပေ။.
၁၅၃၈ တွင်ရေးဆွဲထားသော အမ်စတာဒမ် ပန်းချီကား
အမ်စတာဒမ်ကို ၁၃၀၀ သို့မဟုတ် ၁၃၀၆ ခုနှစ်တွင် မြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၁၄ ရာစုနှစ်မှစ၍ အမ်စတာဒမ်သည် အဓိကအားဖြင့် ဟမ်းဇတစ်အသင်းအဖွဲ့များ (Hanseatic League) နှင့် ကုန်သွယ်မှုကြောင့် စည်ပင်ထွန်းကားလာခဲ့သည်။ ၁၃၄၅ ခုနှစ်တွင် ကယ်လ်ဗာစထရက် (Kalverstraat) လမ်းမပေါ်ရှိ အတူတကွ စားသောက်ပွဲနှင့် ဆိုင်သော ထူးဆန်းမှု (Eucharistic miracle) ကြောင့် အမ်စတာဒမ်အား ပရိုတက်စတင့်တို့၏ သက်ဝင်ယုံကြည်မှု အပြောင်းအလဲများ မဖြစ်ခင်အချိန်အထိ ခရစ်ယာန်ဘုရားဖူး များ၏ အရေးကြီးသော နေရာတစ်နေရာ ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် စတေး အွန်ဂမ် (Stille Omgang) ဟုခေါ်သော သာမန်လူတို့၏ အဝတ်အစားဖြင့် တိတ်ဆိတ်စွာ လှည့်လည်ခြင်းသည် ရှေးခေတ်ဘုရားဖူးအများအပြားရှိခဲ့သည့် သမိုင်းကြောင်း၏ ကြွင်းကျန်ရစ်ခဲ့သော အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၁၆ ရာစုနှစ်တွင် ဒတ်ခ်ျတို့သည် စပိန် ဖီးလစ် ၂ (Philip II of Spain) နှင့် သူ၏ ဆက်ခံသူတို့ကို ပုန်ကန်ကြသည်။ ထကြွရသည့် အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ ၁၀ ပဲနိဟု ခေါ်သည့် အခွန်အခ အသစ်များ ကောက်ခံခြင်းနှင့် ပရိုတက်စတင့် တို့၏ ဘာသာရေးယုံကြည်မှု ကို စပိန်တို့မှ အတင်းအကျပ် စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းအားဖြင့် နှိပ်ကွပ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုပုန်ကန်ထကြွမှုမှ နှစ် ၈၀ စစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဒတ်ခ်ျတို့ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။ ဒတ်ခ်ျတို့၏ ပုန်ကန်မှုခေါင်းဆောင် ဆိုင်းလင့် ဝီလီယမ် (William the Silent) ၏ အပြင်းအထန် တွန်းအားပေးမှုကြောင့် ဒတ်ခ်ျသမ္မတနိုင်ငံသည် သူ၏ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အားလုံးအပေါ်သည်းညည်းခံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်ရှားကျော်ကြားလာသည်။ အိုင်းဘေးရီးယန်း ကျွန်းဆွယ်မှ ဂျူးလူမျိုးများ၊ ဟူဂူနော့ဟု ခေါ်သည့် ပြင်သစ်မှ ပရိုတက်စတင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားများ၊ ဖလန်ဒါဒေသမှ ကုန်သည်များနှင့် ပုံနှိပ်သူများ၊ စပိန်တို့ အုပ်စိုးထားသည့် မြေနိမ့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နိုင်ငံများမှ စီးပွားရေး နှင့် ဘာသာရေး ဒုက္ခသည်များသည် သူတို့၏ လုံခြုံရေးအတွက် အမ်စတာဒမ်တွင် ခိုလှုံကြသည်။ ဖလန်ဒါ ပုံနှိပ်သူများ အများအပြား ဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့် မြို့တော်၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သည်းခံမှု (intellectual tolerance) တို့ကြောင့် အမ်စတာဒမ်သည် ဥရောပသတင်းစာလွတ်လပ်မှု၏ အချက်အခြာဖြစ်လာခဲ့သည်။ 
Gerrit Adriaenszoon Berckheyde ၏ ပန်းချီကား၊ ၁၇ ရာစုနှောင်းပိုင်း ဒမ်စကွဲယား
၁၇ ရာစုတွင် အမ်စတာဒမ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချမ်းသာအကြွယ်ဝဆုံး မြို့ကြီးများတွင် တစ်မြို့အပါအဝင် ဖြစ်လာသဖြင့် အမ်စတာဒမ်၏ ရွှေရောင်နှစ်များဟု ယူဆနိုင်သည်။ အမ်စတာဒမ်မှ သင်္ဘောများသည် ဘောလ်တစ်ပင်လယ်၊ မြောက်အမေရိက နှင့် အာဖရိက တို့သာ မက ယနေ့ခေတ် အင်ဒိုနီးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ သီရိလင်္ကာ နှင့် ဘရာဇီး တို့သို့ ရွက်လွှင့်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး ကုန်သွယ်မှုကွန်ယက်၏ အခြေခံကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အမ်စတာဒမ်မှ ကုန်သည်များသည် ဒတ်ခ်ျအရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီ (VOC) နှင့် ဒတ်ခ်ျအနောက်အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ (WIC) တို့တွင် ရှယ်ယာအများဆုံး ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အမ်စတာဒမ်သည် ဥရောပရှိကုန်စည်များ တင်ပို့ရေးအတွက် အရေးအပါဆုံးဒေသဖြစ်လာပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ငွေကြေးဈေးကွက်အတွက် အဓိကအချက်အချာ နေရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၆၀၂ ခုနှစ်တွင် ဒတ်ခ်ျအရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီ (VOC) ၏ အမ်စတာဒမ်ရုံးခွဲသည် သူ၏ ရှယ်ယာများကို ရောင်းချခြင်းအားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဆုံးသော စတော့အိတ်ချိန်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အမ်စတာဒမ်၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုသည် ၁၈ ရာစု နှင့် ၁၉ ရာစု အစောပိုင်းတွင် ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်။ ဒတ်ခ်ျသမ္မတနိုင်ငံ နှင့် အင်္ဂလန် နှင့် ပြင်သစ် တို့ဖြစ်သော စစ်ပွဲများသည် အမ်စတာဒမ် သို့ ဆိုးကျိုးများ သက်ရောက်စေသည်။ နပိုလီယန်စစ်ပွဲများ အတွင်းတွင် အမ်စတာဒမ်၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုသည် အနိမ့်ဆုံးသို့ ရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၈၁၅ ခု နယ်သာလန် ဘုရင့်နယ်မြေ အစုအဝေးကို တည်ထောင်မှုသည် အလှည့်အပြောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။ မြို့တော်ပုံစံထုတ်သူ ဆယ်မြူရယ် ဆာဖာတီ (Samuel Sarphati) အစရှိသူတို့၏ တည်ဆောက်မှု အသစ်များသည် ပဲရစ် ကို အတုယူခဲ့ကြသည်။
၁၉၀၀ ခုနှစ် Munttoren တာဝါပေါ်မှမြင်ရပုံ
၁၉ ရာစုအကုန်ပိုင်းကို အမ်စတာဒမ်၏ ဒုတိယမြောက်ရွှေရောင်နှစ်များ အဖြစ် တခါတရံတွင် ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုကြသည်။ .ပြတိုက်အသစ်များ၊ ဘူတာရုံ နှင့် ကွန်ကရစ်ခန်းမ (Concertgebouw) တို့ကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်တွင်ပင် စက်မှုတော်လှန်ရေးသည် အမ်စတာဒမ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အမ်စတာဒမ်ကို ရိုင်းမြစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် အမ်စတာဒမ်-ရိုင်း တူးမြောင်း (Amsterdam-Rhine Canal) ကို တူးဖော်ခဲ့သည်။ မြောက်ပင်လယ်တူးမြောင်း (North Sea Canal)ကို တူးဖော်ခြင်းအားဖြင့် ဆိပ်ကမ်းနှင့် မြောက်ပင်လယ်ကြား ဆက်သွယ်မှု အကွာအဝေးကို တိုတောင်းစေခဲ့သည်။ ထို ပရော့ဂျက် ၂ ခုစလုံးသည် ကျန်ဥရောပဒေသအားလုံး နှင့် တကမ္ဘာလုံးသို့ ကုန်သွယ်ရေးကို သိသာစွာ တိုးတက်စေခဲ့သည်။ ၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင် ပိုလန်စာရေးဆရာ ဂျိုးဇက် ကောန်ရတ်ဒ် (Joseph Conrad) က သူ၏ ဝတ္ထု ပင်လယ်၏ကြေးမုံပြင် (The Mirror of the Sea) တွင် အမ်စတာဒမ်အား ပင်လယ်ဖက်မှ မြင်ရပုံကို အနည်းငယ်မျှ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီ အချိန်တွင် မြို့တော်သည် စတင်တိုးချဲ့လာခဲ့ပြီး ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်အသစ်များ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် စစ်အတွင်း ကြားနေခဲ့သော်လည်း အမ်စတာဒမ်တွင် အစားအသောက်ရှားပါးမှု နှင့် အပူပေးရန် ဓာတ်ဆီရှားပါးမှု တို့၏ ဒဏ်ကို ခံခဲ့ရသည်။ ထိုရှားပါးမှုများမှတဆင့် အဓိကရုဏ်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး လူအချို့သေဆုံးခဲ့သည်။ ထိုအဓိကရုဏ်းများကို Aardappeloproer (အာလူးပုန်ကန်မှု) ဟု အသိများ ကြသည်။ လူတို့သည် ကုန်ပစ္စည်းများ အထူးသဖြင့် စားသောက်ကုန်များ ရရှိရန်အတွက် စတိုးဆိုင်များနှင့် ကုန်လှောင်ရုံများကို လုယက်ကြသည်။
၁၉၄၀ ခုနှစ် မေလ ၁၀ရက်တွင် ဂျာမနီတို့သည် နယ်သာလန်ကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၅ ရက်ကြာ တိုက်ခိုက်မှု အပြီးတွင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ဂျာမန်တို့သည် နာဇီအရပ်သားအစိုးရကို အမ်စတာဒမ်တွင် ခန့်ထားခဲ့ပြီး ဂျူးတို့ကို လိုက်လံဖမ်းဆီးရန်အတွက် ကူညီပေးရန်ဖြစ်သည်။ အချို့သော အမ်စတာဒမ်မြို့သားများသည် ဂျူးများကို အကာအကွယ်ပေးခဲ့ကြသဖြင့် သူတို့နှင့် သူတို့မိသားစုများ ထောင်ချခံရခြင်း နှင့် အကျဉ်းစခန်းများသို့ ပို့ဆောင်ခံရခြင်းစသည့် အန္တရာယ်များအတွက် ကြီးစွားသော စွန့်စားမှုများကို ပြုခဲ့ရသည်။ ဒတ်ခ်ျ ဂျူးလူမျိုး ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်တို့သည် အကျဉ်းစခန်းများသို့ တင်ပို့ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုသူများအထဲမှ အထင်ရှားဆုံးမှာ ဘာဂျန်-ဘယ်လ်ဆန် (Bergen-Belsen) အကျဉ်းစခန်းတွင် သေဆုံးခဲ့သော ဂျာမန်မိန်းကလေး အန်နာဖရန့် ဖြစ်သည်။ ဒတ်ခ်ျ ဂျူးလူမျိုး ၅၀၀၀ ခန့်သာ စစ်အပြီးတွင် အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့် အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်ခဲ့ပြီး အစားအစာ နှင့် စက်သုံးဆီ ရှားပါးမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ မြို့သားအများအပြားသည် ကျေးလက်ဒေသများသို့ သွား၍ အစားအစာရှာဖွေကြသည်။ ခွေးများ၊ ကြောင်များ၊ sugar beets အကြမ်း များ နှင့် ပျော့ဖတ်ဖြစ်အောင် ချက်ပြုတ်ထားသော Tulip အဖူးများကို အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက် စားသုံးကြရသည်။ အမ်စတာဒမ်ရှိ သစ်ပင်အများစုကို လောင်စာရရှိရန်ခုတ်လှဲခဲ့ရပြီး အကျဉ်းစခန်းသို့ တင်ပို့ခြင်းခံရသော ဂျူးတို့၏ အိမ်ခန်းများမှ သစ်သားများကို ရယူခဲ့ရသည်။ စစ်အပြီးတွင် ဒတ်ခ်ျ ၁၂၀,၀၀၀ ကျော်တို့သည် နာဇီတို့နှင့် ပူးပေါင်းခြင်းကြောင့် တရားစွဲဆို အရေးယူခြင်းခံခဲ့ရသည်။
မြေအောက်ရထားဘူတာရုံ Nieuwmarkt မှ သမိုင်းဝင် Nieuwmarktrellen ပုံများ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး နှစ်များတွင် အော့စ်ဒေါ့ပ် (Osdorp)၊ စလိုတာဗတ် (Slotervaart) ၊ စလိုတာမီးယား (Slotermeer) ၊ ဂူဇန်ဗယ် (Geuzenveld) စသည့် ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်အသစ်များကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ဤဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များတွင် အများပြည်သူသုံး ပန်းခြံများနှင့် ကျယ်ပြန့်သော ကွင်းပြင်များ ပါဝင်ကြပြီး အဆောက်အအုံသစ်များတွင် ကျယ်ပြန့်ပြီး ပို၍ အလင်းရောင်ရသော အခန်းများ၊ ဥယျာဉ်များ နှင့် လသာဆောင်များဖြင့် နေထိုင်မှုအခြေအနေ ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ စစ်နှင့် ၂၀ရာစုအတွင်း အခြား အဖြစ်အပျက်များကြောင့် မြို့လယ်ခေါင်တစ်ခုံးလုံးသည် လုံးဝနီးပါး ပျက်စီးနေခဲ့သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှပင် နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် အခြား ဩဇာအာဏာရှိသူများက မြို့လယ်ခေါင်၏ အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများကို ပြန်လည်ပုံစံထုတ်တည်ဆောက်ရန် အစီအစဉ်ချကြသည်။ ရုံးအဆောက်အအုံများ တည်ဆောင်ရန် လိုအပ်လာပြီး သာမန်မြို့သားများ ကားသုံးစွဲမှု များလာသဖြင့်လမ်းမများ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်လာသည်။ မက်ထရိုရထားများည် ဆင်ခြေဖုံးအသစ်ဖြစ်သော ဘစ်ဂျ်မာ (Bijlmer) နှင့် အမ်စတာဒမ်မြို့လည်ခေါင်သို့ စတင်ပြေးဆွဲလာခဲ့သည်။ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မည့် စီမံကိန်းမှာ မက်ထရို၏ အပေါ်မှ ဟိုင်းဝေးလမ်းမ အသစ်ကို တည်ဆောက်၍ ဗဟို ဘူတာရုံနှင့် မြို့၏အခြားအပိုင်းများကို ဆက်သွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
စုပေါင်းစီမံကိန်းဖြင့် အဆောက်အအုံအများအပြားကို ဖြိုဖျက်ခြင်းကို အမ်စတာဒမ်၏ ဂျူးတို့နေထိုင်ခဲ့သော ရပ်ကွက်ဟောင်းတွင် စတင်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဂျိုဒန်ဘရီစထရက် (Jodenbreestraat) စသော လမ်းငယ်လေးများကို ချဲ့ထွင်ခဲ့ကြပြီး လမ်းတွင်းရှိအိမ်များအားလုံးလိုလို ဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရသည်။ ဖြိုဖျက်မှု တို့ အားအကောင်းဆုံးအချိန်တွင် မြို့ကို ပြန်လည်ပုံဖော်ခြင်းကြောင့် ဖြိုဖျက်ခံရခြင်းအတွက် ပြည်သူများမှ ဒေါသထွက်လာကြသဖြင့် Nieuwmarktrellen (နျူးမက် (Nieuwmarkt ) အဓိကရုဏ်း) ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုအဓိကရုဏ်း၏ ရလဒ်အနေနှင့် ဖြိုဖျက်ခြင်းများကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ဟိုင်းဝေးလမ်းမကို တည်ဆောက်ခြင်း မရှိတော့ပဲ မက်ထရိုရထားလမ်းသာ ပြီးစီးခဲ့သည်။ လမ်းအနည်းငယ်သာ လမ်းကျယ်အဖြစ် ကျန်ရစ်တော့သည်။ ဖြိုဖျက်ခံရသော အဆောက်အအုံများနေရာတွင် ရပ်ကွက်တို့၏ အလယ်ခေတ်က လမ်းများ၏ ပုံသဏ္ဌန်အတိုင်း အဆောက်အအုံအသစ်များကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ကြသည်။ လုံးဝနီးပါး ဖြိုဖျက်ပြီးသွားသော ဝါတာလူး ပလိန်း (Waterlooplein) ၏ နေရာတွင် မြို့တော်ခန်းမအသစ်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။
အမ်စတာဒမ်သည် မြောက်ဟော်လန်ဒေသ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပြီး နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ အနောက်ပိုင်း အုထရာ့ချ်နှင့် ဖလယ်ဗိုလန်း ဒေသတို့နှင့် ကပ်လျှက် တည်ရှိသည်။ အမ်စတယ်မြစ်သည် မြို့လည်ခေါင်တွင် အဆုံးသတ်ပြီး တူးမြောင်းပေါင်း မြောက်များစွာနှင့် ဆက်သွယ်၍ နောက်ဆုံးတွင် အိုင်ဂျေ ပင်လယ်အော်တွင် အဆုံးသတ်သည်။ အမ်စတာဒမ်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက် ၃ မီတာတွင် တည်ရှိသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မြေကြီးသည် လူတို့လုပ်သော ရေကန်များ ပါဝင်ပြီး ပြန့်ပြူးနေသည်။ မြို့၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင် သဘာဝအလျောက် မဟုတ်ဘဲ လူတို့ ဖန်တီးထားသည့် ဟတ်အမ်စတာဒမ်စီဘော့စ် ဟုခေါ်သည် သစ်တော ရှိသည်။ အမ်စတာဒမ်သည် ရှည်လျားသော မြောက်ပင်လယ်တူးမြောင်း မှတဆင့် မြောက်ပင်လယ်နှင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။
အမ်စတာဒမ်နှင့် မြို့ကို ဝန်းရံထားသော မြို့ပြဧရိယာမှာ မြို့ပြဖြစ်ထွန်းမှု သိပ်သည်းစွာ ရှိသည်။
မြို့တည်နေပုံ နှင့် ဗိသုကာပညာပြင်ဆင်
ညဖက်ပျော်စရာများ နှင့် ပွဲတော်များပြင်ဆင်
အမ္မစတာဒမ်မြို့သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်၍ မြို့တော်လည်းဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်အစိုးရ ၏ ရုံးစိုက်ရာသည် ဟိတ်မြို့ဖြစ်သော်လည်း အမ္မစတာဒမ်သည် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းတို့ဖြင့် အလွန်ကြီးကျယ် စည်ကားလှသည်။ ထို့ပြင် အမ္မစတာဒမ်မြို့၏ ကျော်ကြားမှုမှာ အီတလီနိုင်ငံ ဗင်းနစ်မြို့ကဲ့သို့ မြို့ခင်းမြို့ကွက်၏အလှအပကို တိုးစေပြီးလျှင် ကူးသန်းသွားလာရေးအတွက် ကြီးစွာသော အထောက်အပံ့ကိုဖြစ်စေသော တူးမြောင်းများ ကွေ့ကောက်ယှက် ဖြာလျက် ရှိခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်ပေသည်။
မြို့၏တည်နေရာသည် ဟော်လန်နယ်အတွင်း၌ ရှိ၍ အမ္မစတယ်မြစ်နှင့် အိုင်းမြစ်နှစ်ခုတို့ ပေါင်းဆုံရာအရပ်၌ ဖြစ် သည်။ ဇွိုင်ဒါဇေးမှငါးမိုင်ခန့်ကွာသည်။ အမ္မစတာဒမ်မြို့၏ သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းသည် ဇွိုင်းဒါဇေး၏ လက်တက်တစ်ခုဖြစ် သော အိုင်းမြစ်ပေါ်တွင်ရှိ၍ မြောက်ပင်လယ်နှင့်လည်း တူး မြောင်းတစ်ခုအားဖြင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။ ထို့ပြင် ဇွိုင်ဒါဇေး ၏အဝင်ဝရှိ ဟယ်လဒါမြို့နှင့်လည်း တူးမြောင်းအားဖြင့်အဆက် အသွယ်ရှိလေသည်။
မြို့၏တည်နေပုံသည် ဆန်းစလ၏ ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်၍ အလယ်တွင် ဒမ်ဟုခေါ်သော ရင်ပြင်ကျယ်ရှိသည်။ ထိုရင်ပြင် ကျယ်မှ လမ်းမကြီးငယ်နှင့် မြစ်ချောင်းအသွယ်သွယ်တို့သည် ယှက်ဖြာ၍ထွက်ကြသည်။ ကမ်းပါးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် မြင့် မားသောသစ်ပင်ကြီးများနှင့် တိုက်တာအိမ်ခြေများရှိသော တူး မြောင်းများသည် အမ္မစတာဒမ်မြို့ကို ကျွန်းငယ်ပေါင်း ၉ဝ ခန့် အဖြစ်ရောက်ရှိအောင် ပိုင်းခြားထားလေသည်။ တူးမြောင်းကမ်း ဘေးမှ အဆောက်အအုံများကို ဗင်းနစ်မြို့၏အဆောက်အအုံများ ကဲ့သို့ တူးမြောင်း၏အောက်ခြေ သဲမြေထဲ၌ စိုက်ထူထားသော တိုင်များ ထောက်များပေါ်တွင် ဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအဆောက်အအုံများတွင် ၁၇ ရာစုခေတ်က ဆောက်လုပ်ခဲ့ သော လှပခန့်ညားသည့် အဆောက်အအုံများ အများအပြား ပါဝင်၍ အမ္မစတာဒမ်မြို့သည် ဥရောပနိုင်ငံတွင် သာယာလှပ သော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပေသည်။
တစ်ဆယ့်ခြောက်ရာစုတွင် အန့်တွပ်မြို့၏အခြေအနေ ဆုတ်ယုတ်လာသဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရှဲ့မြစ်ကို ပိတ်လိုက်သဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဖလင်းမစ်နယ်များမှ နယ်ပြောင်းသူများ ဝင် ရောက်လာသဖြင့်လည်းကောင်း အမ္မစတာဒမ်မြို့သည် တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးလာသည်။ ၁၆ဝ၂ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့အရှေ့ပိုင်း၌ တန်ခိုး ထွားခဲ့သော ဒပ်ချအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီကြီးကို အမ္မစတာဒမ်မြို့၌ ပင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အမ္မစတာဒမ်မြို့၏ အထွန်းကား ဆုံးအချိန်သည် ၁၇ ရာစုနှစ်ဖြစ်၍ ရေသစ်မြေသစ်ရှာအဖွဲ့များ ၏ သင်္ဘောကြီးငယ်များ အဝင်အထွက်များပြားကာ ဖွံ့ဖြိုး စည်ကားခဲ့သော သင်္ဘောဆိပ်မြို့ကြီးလည်းဖြစ်သည်။ မြောက် ပင်လယ်ဘက်သို့လည်းကောင်း တောင်ဘက် ရိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသ သို့လည်းကောင်း၊ ကုန်စည်များတင်ပို့ရေး၌လည်း အမ္မစတာဒမ် သည် အချက်အချာဖြစ်ခဲ့သည်။ နောင်အခါ ရော့တဒမ်မြို့သည် သင်္ဘောဆိပ်မြို့အဖြစ် တိုးတက်စည်ကားလာသည့် တိုင်အောင် အမ္မစတာဒမ်သည် စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းတို့ဖြင့် စည်ကားမြဲ စည်ကားလျက်ပင်ရှိသည်။
အမ္မစတာဒမ်မြို့၏ ကြီးကျယ်သောလုပ်ငန်းများအနက် စိန်သွေးလုပ်ငန်းသည် တစ်ရပ်အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ပင်လယ် ရပ်ခြား၌ ဒပ်ချတို့၏ကိုလိုနီများ ဖွံ့ဖြိုးစဉ်က အမ္မစတာဒမ်၌ စိန်သွေးလုပ်ငန်းသည် ယခင်လောက် မကြီးကျယ်တော့ပေ။ အခြားကြီးကျယ်သော လုပ်ငန်းကြီးများမှာ ဆေးလိပ်လုပ်ငန်း၊ ဆပ်ပြာလုပ်ငန်း၊ လင်နင်ထည်နှင့် ပိုးထည်လုပ်ငန်း၊ လက်ဝတ် ရတနာလုပ်ငန်း၊ အခြားကုန်ချောပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ သို့သော် အမ္မစတာ ဒမ်မြို့သည် စက်မှုမြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထက် ကုန်သွယ်မြို့တစ်မြို့ အဖြစ် ပို၍ကြီးကျယ်ထင်ရှားလေသည်။
အမ္မစတာဒမ်မြို့သည် ကမ္ဘာ၌ထင်ရှားသော အနုပညာ မြို့တော်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ထိုမြို့၏ ပြတိုက်များ၌ အဖိုး ထိုက် အဖိုးတန် အနုပညာလက်ရာများရှိလေရာ၊ ယင်းတို့ကို စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်ကြားမှပင် မပျက်စီးမဆုံးရှုံးရလေအောင် ထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာကျော်ပန်းချီ ဝိဇ္ဇာကြီး ရင်းဗရန့်၏ လက်ရာမွန်များကို ကျနစွာထိန်းသိမ်း ထားခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ပြတိုက်များတွင်ထားခဲ့ သော အဖိုးတန်အနုပညာပစ္စည်းများကို ဂူများထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့ သိမ်းဆည်းထားခဲ့သဖြင့် စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်မှ ကင်းလွတ်ခဲ့ကြ သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက အမ္မစတာဒမ်မြို့သည် စစ် ၏ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အနည်းအကျဉ်းမျှသာ ခံခဲ့ရ သော်လည်း မြို့သူမြို့သားများအနေဖြင့် စစ်၏ဒဏ်ကို အလူး အလဲခံခဲ့ကြရသည်။ လေးနှစ်ခန့်ကာလပတ်လုံး ရန်သူတပ်များ ၏လက်အောက်၌ အလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ကြရ ၍ အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ် စားသောက်ခဲ့ရပြီးလျှင် ဆင်းရဲ ငတ်ပြတ်လွန်းသဖြင့် ရာနှင့်ထောင်နှင့်ချီ၍သေဆုံးကြသူများကို ပင် မမြှုပ်နှံနိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ကြရလေသည်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင်မှ သာ မဟာမိတ်တပ်များက အမ္မစတာဒမ်မြို့ကို ပြန်လည်သိမ်း ပိုက်နိုင်ခဲ့လေသည်။
မြို့၌ရှိ အဓိကရအဆောက်အအုံများမှာ နန်းတော်ကြီး၊ ဒပ်ချမင်းများ အစဉ်အဆက် ဘိသိက်ခံခဲ့ကြသော နယူးချပ်ခေါ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးတို့ဖြစ်သည်။ အမ္မစတာဒမ်၌ တက္ကသိုလ် ကြီးနှစ်ခုရှိသည်။ ယင်းတို့အပြင် အနုပညာလက်ရာမွန်များထား ရှိသော ရစ္စပြတိုက်ကြီးလည်းရှိသည်။ ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ကြီး သည် ထင်ရှားကျော်ကြားလှ၍ အမ္မစတာဒမ်မြို့သည် တျူးလစ် ပန်းနှင်ဥတက်များကို နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ရောင်းချရာ၌ အချက် အခြာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ယင်းမြို့ကြီး၏ ရပ်ကွက်တစ်ခုတွင် လမ်းများကို ပန်းနာမည်များဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားလေသည်။
↑ Berns၊ Jan (1993)။ Hij zeit wat: de Amsterdamse volkstaal (Dutchဘာသာစကားဖြင့်)။ The Hague: BZZTôH။ pp. p. 91။ ISBN 90-6291-756-9။ Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (အကူအညီ)CS1 maint: extra text (link) CS1 maint: unrecognized language (link)
↑ Amsterdam 200 jaar ouder dan aangenomen (in Dutch)။ Nu.nl (22 October 2008)။ 22 October 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ De geschiedenis van Amsterdam (in Dutch)။ Municipality of Amsterdam။ 18 May 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-05-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mirakel van Amsterdam (in Dutch)။ 2008-05-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Eighty Years' War (in Dutch)။ Leiden University။ 2008-05-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The oldest share။ 2008-05-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Amsterdam through the ages -A medieval village becomesaglobal city။ 1 May 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-05-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Aardappeloproer (pdf) (in Dutch)။ 2008-05-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမ်စတာဒမ်မြို့&oldid=627122" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။